वर्षेनी प्राकृतिक विपत्तिकाे सामना गर्दै सिन्धुपाल्चाेक « Janata Samachar
काठमाडौं । नेपालको राजधानी काठमाडौंदेखि करिब ३८ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला । अधिकांश पहाडि भूभाग रहेको सिन्धुपाल्चोकमा तीन लाखभन्दा बढी जनसंख्या छन् । राजधानीको नजिकै रहेर पनि विकासमा पछाडि परेको सिन्धुपाल्चोक प्राकृतिक सम्पदा र सुन्दरताका दृष्टिले भने देशभरका उत्कृष्ठ जिल्लाका दाँजोमा आउँछ । तर प्रकृतिले नै यहाँ बारम्बार अनेकौँ चुनौती थपिदिने गरेको छ । यहाँका तीन लाख मानिस वर्षौँदेखि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । कहिले भूकम्प त कहिले बाढीपहिरोबाट वर्षेनी ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति सहँदै आइरहेका छन् सिन्धुपाल्चोकबासी ।
–२०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबारको दिन गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर ७.८ म्याग्नेच्यूटको भूकम्प गयो । भूकम्पले देशभर ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुर्यायो । भूकम्पले जमिन मात्र हल्लाएन, लामो समयसम्म नेपालीको मनमुटु समेत हल्लिरहयो । देशभर ८ हजार ९ सय ६२ जना मानिसको मृत्यु भयो भने २२ हजार तीन सय दुई जना घाइते भए । एक सय १५ जना अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन् । देशभर झण्डै ९ हजार मानिसको मृत्यु हुँदा सिन्धुपाल्चोकमा मात्र साढे तीन हजार मानिसको मृत्यु भयो ।
-२०७२ को भूकम्पमा परी सिन्धुपाल्चोकमा ३ हजार ५ सय ७० जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । १ हजार ५ सय ६९ जना घाइते भएका थिए भने ८ जना अझै पनि बेपत्ता छन् । देशभर ७ लाख घर पूर्णरुपमा क्षति हुँदा सिन्धुपाल्चोकमा मात्र ९० हजार ५ सय ९४ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको तथ्यांक छ । गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको भए पनि भूकम्पबाट देशको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक नै बन्यो । धेरैका काख उजाडिए, धेरैका सिन्धुर पुछिए, धेरै टुहुरा भए । आफन्त गुमाए, घर भत्कियो, पशुचौपायाको सोतर नै लाग्यो । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा गुज्रिएको सिन्धुपाल्चोकले एकपछि अर्को विपत्तिको सामना गरिरहेको छ ।
–२०७७ साल भदौ ३० गते बिहान धेरैको आँखा निन्द्राबाट नखुल्दै, थोरैले बिहानको नित्यकर्म नसक्दै फेरि भूकम्पले हल्लायो । देशका धेरै ठाउँमा भूकम्पको पराकम्पन महसुस भयो । यसअघि भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकमा नै केन्द्र बनाएको थियो यसपालिको भूकम्पले । ६ म्याग्निच्यूडको यो भूकम्प सिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्रविन्दु बनाएर गएको थियो । भूकम्पविद्का अनुसार २०७२ सालकै भूकम्पको पराकम्प भएको यसले यसपटक भने खास्सै क्षति पुर्याउन पाएन । तर यसपालिको बाढी र पहिरोले पुर्याएको भौतिक र मानवीय क्षतिबाट तङ्ग्रीन नपाउँदै आफ्नै ठाउँलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प जानु आफूहरुकै दुर्भाग्य भएको भन्दै पीडितहरु चित्त बुझाइरहेका छन् ।
६८ प्रतिशत पहाडी क्षेत्र रहेको नेपालमा बाढीपहिरो अत्यन्तै जटिल समस्या हो । यहाँ वर्षेनी बाढीपहिरोबाट सयौँ मानिसको ज्यान जाने गरेको छ भने लाखौँको क्षति हुने गरेको छ । त्यसमा पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीपहिरोको समस्या बढी नै हुने गरेको देखिएको छ । २०७२ सालदेखि २०७७ सालको भदौसम्म आइपुग्दा यो ६ वर्षको अवधिमा जिल्लामा ४० वटा बाढीपहिरोका घटना भएका छन् । यस वर्षको असारदेखि भदौ अन्तिमसम्ममा मात्र ५ वटा बाढीपहिरोका दर्दनाक घटना भएका छन् । यो तीन महिनाको अवधिमा सिन्धुपाल्चोकमा मात्र बाढीपहिरोबाट ७२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन् । ४१ जना अहिलेसम्म बेपत्ता रहेका छन् ।
–असार २५ गते जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा पहिरो गयो । यसबाट ४ जनाको मृत्यु भयो भने २२ बेपत्ता भए । ५ जना घाइते भएका छन् ।
–२५ गतेको बाढीपहिरोको घाउ सेलाउन नपाउँदै साउन ९ गते भोटेकोशी गाउँपालिकामा नै फेरि ५ जनाको ज्यान लिनेगरी बाढीपहिरो गयो ।
–साउन १९ गते जिल्लाकै मेलम्ची नगरपालिकामा १० जनाको ज्यान लिने गरी अर्को बाढीपहिरो गयो । एक जना घाइते भए ।
–साउन ३० गते जुगल गाउँपालिका–२ मा ३७ जनाको ज्यान लिने गरीको बाढीपहिरो गयो । ३० गतेको पहिरोमा बेपत्ता भएका दुई जना अझै भेटिएका छैनन्।
–भदौ २८ गते बाह्रबिसे नगरपालिका–७ मा गएको बाढीपहिरोबाट हालसम्म १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४ जना घाइते भएका छन् । १५ जना अझै बेपत्ता अवस्थामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
बाढीपहिरोबाट एकै परिवारका सबै जनाको मृत्यु हुँदा कति परिवारको वंश नै नाश भएको छ भने कति परिवारका सबै गुमाएर एक्लो हुनुपरेको अवस्था छ । ज्यान गुमाउनेले त ज्यान मात्र गुमाए, बाँच्नेहरुले परिवारका सदस्य गुमाए, कसैले हातखुट्टानै गुमाए भने धेरैले घर र जमिन पनि गुमाए । सबै गुमाएर बाँच्नुभन्दा पहिरोमै पुरिएर मरेको भए हुने भन्ने विलौना गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संघसंस्थाबाट आएको राहतले पेट भर्दै छन्, लाज ढाक्दै छन्, पोलेको घाउँमा मल्हम लगाउने प्रयास गर्दै छन् अहिले सिन्धुपाल्चोकबासी ।
प्रकृतिको टार्गेटमा सिन्धुपाल्चोक नै किन ?
प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, भूकम्प आदी) आफैँमा विनाशकारी होइनन् । २०७२ को भन्दा १९९० को भूकम्प ठूलो थियो । तर विनाश २०७२ मा धेरै भयो । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ विनाशकारी, भूकम्प अर्थात कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप हाेइनन् । विनाशकारी हाम्रा भौतिक संरचना नै हुन् ।
-के भन्छन् विज्ञ ?
भूकम्पविद् लोक विजय अधिकारीका अनुसार भारतीय भूखण्डको उत्तरतिर भइरहेको विस्थापनका कारण नेपालमा भूकम्प जान्छ । भारतीय भूखण्ड प्रत्येक वर्ष करिब ४ सेन्टिमिटरका दरले उत्तरतर्फ सरिरहेकाे छ र करिब २ सेन्टिमिटरका दरले हिमालय क्षेत्रमा दबाब सञ्चित भइरहेको छ। यसरी सञ्चित भएको दबाब चट्टानले थेग्न सक्नेभन्दा बढी भएमा भौगर्भिक दरारहरूमा अकस्मात विस्थापन भइ भूकम्पका तरंगहरु प्रशारण हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी भौगोलिक अवस्था कमजोर भएको ठाउँमा निरन्तरको वर्षा, नदीको कटानले अझ कमजोर बनाइ पहिरो जाने गर्छ ।
‘भूकम्पका कारण हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति हाम्रो मानवीय भौतिक संरचनामा नै निर्भर हुन्छ’, अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रा भौतिक संरचनाहरु (घर, गोठलगायत विभिन्न भवन आदि) कमजोर हुने र भूकम्पको कम्पनले यिनीहरु भत्कन गइ मानवीय क्षति हुने हो ।’
जुन ठाउँको भौगोलिक अवस्था कमजोर छ त्यसै ठाउँमा बढीपहिरोको प्रभाव पनि बढी हुने देखिन्छ । कमजोर भूसंरचना भएको क्षेत्रमा बसेको बस्तीलाई नै पहिरोले बढी समस्यामा पार्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । २०७२ सालको भूकम्पका कारणमात्र देशभर २५ हजार सानाठूला पहिरो गएको जानकारी दिँदै अधिकारीले सिन्धुपाल्चोकको हकमा पनि भौगोलिक संरचना कमजोर हुनु, मानव निर्मित भौतिक संरचना कमजोर हुनु, अध्ययन गरी बाढीपहिरोको जोखिमयुक्त ठाउँ पत्ता लगाएर बस्ती नबसाउने र बसेकाे बस्ती सार्ने काम नहुनु नै प्राकृतिक प्रकोपबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति बढी हुनुको मुख्य कारण भएको बताउनुभयो ।
सिन्धुपाल्चोकको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने र जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती बस्न नदिने, बसेको बस्तीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने काम गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्